अर्डोरो - थर्मोमिक्स रेसिपीहरू ThermoRecines
Cremas5 मिनेट4 व्यक्ति
वास्तवमा, यो होइन कि यो एक धेरै मौलिक नुस्खा हो। यो एउटा नुस्खा हो जुन मैले इन्टरनेटमा पढेको छु र मलाई यसको लागि साँच्चै मनपर्यो सरलता। संक्षेपमा, हामी भन्न सक्छौं कि यो हो साल्मोरेजो, तर रातो मिर्च को एक धनी संकेत संग।
जोसे म्यानुएलले आफ्नो ब्लगमा यस परिकारको उत्पत्ति सेभिलको ओसुना भन्ने सहरबाट भएको बताउँछन्, र यो नाम ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्न सक्ने उत्साहको कारणले हो। लसुन। मेरी आमासँग कुरा गर्दै, उनले मलाई "अर्डोरिया" नामले चिनेकी थिइन र "अर्डोरिया" भनेर चिनेकी थिइनन्, त्यसैले यो नुस्खामा, म आफ्नो आमालाई राख्न चाहन्थें।
तर ए, नामको पर्वा नगरी, यो एक धेरै साधारण र धेरै धनी नुस्खा हो। र निस्सन्देह, तपाईं यसलाई एक सानो साथ गर्न सक्नुहुन्छ सेरानो ह्याम, कडा-उमालेको अण्डा, वा के तपाईं सबैभन्दा बढी मन पर्छ। मँ, जस्तै तपाईले फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ (जुन ती तरिका धेरै राम्रो छैन किनकि त्यस दिन मसँग क्यामेरा थिएन जुन हामी सँधै गर्छौं, माफी चाहन्छु!), मैले यसमा केही पनि राखिनँ, मलाई मन पर्छ। यो खाए जस्तै।
टमाटर र मिर्चमा आधारित एक नुस्खा।
Or वा ri पाकेको टमाटर
एक दिन पहिले रोटी पानी मा भिजाउनु र सुकाउनु भन्दा पहिले (राम्रो मोमशन शैली रोटी छ, तिनीहरू एक नरम क्रस्ट संग धेरै सेतो रोटी हुन्)।
२ वा table चम्मच जैतूनको तेल
१ टेबल स्पून सिरका
१/२ ठूलो रातो घण्टी मिर्च (कच्चा)
थोरै पानी आवश्यक छ भने (यदि यो अत्यधिक बाक्लो छ भने)
पहिले हामीले कडा उमालेको अण्डालाई शीशामा राख्यौं र त्यसलाई काट्यौं Seconds सेकेन्डको गति 5/ १/२ र हामी तिनीहरूलाई रिजर्भ गर्दछौं।
त्यसपछि हामी ह्याम काट्छौं Or वा tur टर्बो स्ट्रोक (यो आकारमा निर्भर गर्दछ जुन हामीले हेम परिचय गर्दछौं)। हामीले बुक गर्‍यौं।
काँचै नधोई, टमाटर, मरिच, लसुन र नुन थप्नुहोस्। हामी प्रोग्राम Seconds सेकेन्ड, गति 30 र पछि १ मिनेट, १० सम्म पुग्न प्रगतिशील गति.
हामी रोटी र सिरका थप्छौं। हामी प्रोग्राम १ मिनेट, गति 1।
हामी ढक्कन मा एक जग राख्छौं र सक्रिय गर्नुहोस् स्केल प्रकार्य। हामी तेल तौल र रिजर्भ।
हामीले मेसिनलाई काममा लगायौं गति 3/ १/२ र कुनै समय छैन (यो एक गति हुनुपर्दछ जुन हटाउँछ तर छिचोट बिना, किनकि हामी बीकर हटाउन जाँदैछौं)।
राम्रोसँग मिसिएसम्म तेललाई बोतलको माध्यमबाट अलि-अलि हाल्नुहोस्।
अब हामी बीकर राख्छौं र मिश्रण गर्छौं Seconds० सेकेन्ड, गति 10।
हामी यसलाई फ्रिजमा छोड्छौं र हामी सबैलाई सब भन्दा मन पराउने सेवाको साथ सेवा दिन्छौं।
थप जानकारी - यस गर्मी को लागी9विदेशी gazpachos
स्रोत - Blog Asopaipas
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: सजिलो, ल्याक्टोज असहिष्णु, अण्डो असहिष्णु, १ 15 मिनेट भन्दा कम, शासन, सूप र क्रिम, भेगन
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » सामान्य » सजिलो » जल्दै
कति मजाको कुरा, अर्को दिन कसैले मलाई सेभिलमा साल्मोरजो भनेर बोलाइएको भन्यो, र म भन्छु, यदि म सेभिलबाट हुँ भने यो मेरो पहिलो समाचार हो ... त्यसैले मलाई पहिले नै थाहा हुन्छ कि त्यसपछि के हुन्छ, हे, यो छ ओसुनाबाट, रातो मिर्चको विशेषताको साथ, तर स्वाद धेरै फरक हुँदैन, ठीक छ? मलाई यो मनपर्दछ, यो मेरो मनपर्ने भाँसाहरू मध्ये एक हो, हिजो मैले यो गरें, यद्यपि हामी यसलाई पोर्रा एन्टिकेराना पनि भन्छौं (रातो रातो मरिच बिना नै,)
कस्तो जिज्ञासु! मेरी आमा, जो ग्रेनाडाकी हुन्, खुशी बनाउँछिन् र सँधै मलाई भन्छन् कि जयकार र साल्मोरेजो बीचको भिन्नता रोटी, टमाटर र तेलको मात्राको बीचको भिन्नता हो (मलाई लाग्छ कि साल्मोरेजोमा अधिक टमाटर छ)।
सत्य यो हो कि एर्डोरियो र साल्मोरेजोको स्वाद एकदम मिल्दोजुल्दो छ, तर मलाई रातो मिर्चको स्पर्श साँच्चै मनपर्‍यो।
आज म तपाईंलाई भन्नेछु ... धन्यवाद
मोन्टेलाई जवाफ दिनुहोस्
सन्दर्भका लागि धन्यबाद। सत्य यो हो कि यो साल्मोरेजो वा पोर्रा एन्टिकेरानाको एक प्रकार हो। यो ओसुना, एल रुबियो (सेभिल) को क्षेत्रमा बनेको छ र रातो मिर्चको प्रयोगले यसको विशेषता गर्दछ। र जलेको चीज आउँछ जस्तो तपाईं लहसुन र मिर्चको प्रयोगबाट भन्नुभएको छ। मेरो शहर एस्टेपामा, साल्मोरेजो हरियो मिर्चको टुक्राले बनेको छ र रातो छैन, त्यहाँ मानिसहरू जो थाइम थप्दछन्।
ती जीवनकालको साधारण रेसिपीहरू हुन्, ती हुन् जसलाई म सबैभन्दा धेरै प्रशंसा गर्छु।
नमस्ते होसे मानुएल,
नुस्खा पोष्ट गर्नुभएकोमा धन्यबाद। मलाई यो वास्तवमै मनपर्‍यो, त्यसैले यो प्रायः दोहोरिनु पर्छ। यो अचम्मको कुरा हो कि त्यहाँ एउटै थालमा कति किसिमका प्रजातिहरू छन् जुन तपाईं फरक ठाउँहरू मार्फत जानुहुन्छ, हैन? म यसलाई प्रेम गर्छु अर्को पटक थाईमको साथ प्रयोग गरेर।
मलाई यो मनपर्दछ, तर मलाई लसुन मनपर्दैन, म पनि त्यस्तै भन्छु, तर लसुन बिना यो पनि राम्रो हुन्छ
निस्सन्देह एम। कारमेन, र प्रत्येकलाई जो यसलाई आफ्नो स्वाद अनुकूलित गर्दछ, यो पनी पक्का पनि राम्रो छ।
ठिक छ, म यसलाई सलोमर्जो भन्छु तर मिर्च बिना र मलाई लसुनको स्वाद धेरै मनपर्दैन किनकि मैले यसमा एउटा सानो राखें र यो वास्तवमै राम्रो छ।
हो, मेरी आमा ओसुनाकी हुन्, र मेरो घरमा उनले सधैं अर्डोरिया खाइन्, विशेष गरी गर्मीमा, मास्टर गरिएको कडा उमालेको अण्डा र थालमा जैतूनको तेलको थोप्लो अर्टोरिया सेवा गरिसके पछि। मेरी आमाले रोटीको टुक्रालाई रोटीको चम्मचहरू जस्तै चक्कुले काटिदिनुभयो। त्यस दिन डिश अनौंठो थियो। तर कस्तो डिश। साल्मोरेजोको स्वादमा फरक बढी हुँदैन, म रातो मिर्चको साथ साल्मोरजो पनि बनाउँछु। जे भए पनि, म धेरै खुशी भए कि अर्दोरिया नुस्खा किताबमा आए, मलाई शव्दको उत्पत्ति थाहा थिएन, र मलाई यो मनपर्‍यो। धन्यबाद।
मेरी आमा पनि अन्डालुसियाको सुन्दर शहर ओसुनाकी थिइन, कि म तपाईलाई सिफारिश गर्दछु कि यो डिशको भ्रमण गर्नु यसको ग्यास्ट्रोनोमीको सबैभन्दा विशिष्ट हो म यसलाई सधै अर्डोरियाको रूपमा चिन्छु न कि अर्डोरीयो, र मेरी आमाले कडा उमालेको अण्डा र तेलमा टुना थप्नुभयो। टुप्पोमा।
यसलाई हामी एन्टेकेराना पोर्रा भन्छौं (मालागामा एन्टेकेरा भनिने शहर पछि) तर, यसलाई सल्मोरेजो पनि भनिन्छ र ओसुनालाई एल्डोरिया पनि भनिन्छ, मलाई लाग्छ कि यो सबैका लागि समान विधि हो, केवल यहाँ एस्टेपा र ओसुनाको क्षेत्रमा। हामी रातो मिर्च तर थोरै हरियो मिर्च जोड्दैनौं, यो धेरै राम्रो छ, बनाउन चाँडै र धेरै, धेरै स्वस्थ। अभिवादन
यसलाई अर्डोरिया भनिन्छ, अर्डोरियो होइन।
नमस्ते होसे, यदि तपाईंले नुस्खाको परिचय पढ्नुभयो भने तपाईंले बुझ्नुहुनेछ कि किन हामीले जलाउनु भएको थियो र जलाउनु भएको छैन।